Qaramada Midoobe oo Guddoomiyaha Golaha Shacabka u gudbisay walaaca ay ka qabaan sharci maanta Baarlamaanka la keenay – Kalfadhi
Qaramada Midoobe oo Guddoomiyaha Golaha Shacabka u gudbisay walaaca ay ka qabaan sharci maanta Baarlamaanka la keenay
Qaramada Midoobe ayaa maanta muujisay walaaca ay ka qabto isku day miiska lagu soo saarayo sharci cusub oo leh cilado qota dheer ah, kaas oo ogolaanaya guurka carruurta, isagoona ka hor imaanaya heshiisyada caalamiga ah.
Qaramada Midoobe iyo saaxiibadeeda ayaa walaacooda u gudbiyay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitter-ka ayey ku sheegeen in Golaha wasiiradda ay dib usoo bandhigaan sharciga asalka ah ee Sexual Offences bill.
Fadhigii maanta ee xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa waxaa hareeyay buuq ka dhashay ajandaha kulanka, kaas oo ahaa akhrinta Koowaad ee Hindise Sharciyeed Dambiyada la xiriira Galmada Dumarka.
Xilhdibaannada ayaa ku tilmaamay sharcigan inuu ka hor imaanayo Diinta Islaamka, iyadoo dalbaday in dib loo celiyo.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Ibraahim Muudeey, ayaa sheegay in iyaga ay rabaa in Dastuurka dalka u yaallay la waafiyo Sharciga Dambiyada la xiriira Galmada Dumarka, haddii wax shareecada khilaafaya ku jiray Baarlamaanka ayaa laga rabaa in uu ka saaro.
Sannadii 2018, Golaha Wasiiradda ayaa ansixiyay sharciga, waxaana xildhibaannada ay ku doodeen in sharc midkaasi ka baddelan la keennay golaha.